ငှမေကျြနှာကွောငျ့ နိုငျငံရေးလုပျနတေဲ့ အနုပညာရှငျ တှကေို ခနျ့စညျသူ ပွောပွီ... - AtoZ Daily
မဂျလာပါ ပရိတျသတျ ကွီးရပေိုကျဆံမကျြနှာကွောငျ့ နိုငျငံရေး လုပျနတေဲ့အနုပညာရှငျ တှကေို ခနျ့စညျသူ ပွောပွီရုပျရှငျဥက်ကဌကွီးဟောငျး ခနျ့စညျသူ က အားလုံးသိအောငျ ပွောပွီ။
ရနျကုနျ ဇှနျ (၆) ရကျ နို ငျငံတျော စီမံ အုပျခြုပျရေးကောငျ စီလကျ ထကျ ပထမ ဆုံး အကွိမျရုပျရုငျ အစညျး အရုံး ဥက်က ဌ အဖွဈတာဝနျ ပေးခွငျးခံ လိုကျ ရ သညျ့ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူနှငျ့ ပတျသကျ၍အနုပညာ အတိုငျး အဝနျး အခြို့နဲ့၎င်းငျးအား အားပေးနသေညျ့ပရိတျသတျအခြို့တို့အကွားလူမှု ကှနျရကျစာ မကျြနာမြားပျေါတှငျ ဝဖေနျမှုမြား မွငျ့တကျ လကျြ ရှိ သညျ ကို သိပွီး ဖွဈမှာပါ
ထို့ကွောငျ့ ရုပျရှငျအစညျးအရုံး ဥက်ကဌဟောငျးကိုခနျ့စညျသူ၏ သဘောထား မှတျခကျြမြားအား ကောကျနုတျ တငျပွ လိုကျ ရပါသညျ။ခု ခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့ ကို ဝဖေနျ နကွေ မယျဆို တာကြှနျတျော ကွို တှကျ ပွီးထားပါ။ကြှနျတျောတို့ လော က အတိုငျး အဝနျးတှေ ကရော ကြှနျတေျာ့ကို ခဈြ တဲ့ ပရိတျသတျ တှေ ကရောပေါ့ဗြာကြှနျတျော ပွော မ ယျ့ တာဝနျ ဆိုတာ ယူခငျြမှလညျး ရ ခငျြ မှ ရ တာ ရ ခငျြ သျော လညျး ပေးခငျြမှ ပေးတာမြိုးလေ ဗြာဆိုတော့ ဘယျ လိုပဲ ပွော ကွ ပါ စေ ဗြာ။
ကြှနျတျော ကြှမျးတဲ့ အနုပညာ ကြှနျတျောကငျြလညျ နတေဲ့ လောက ထဲ က ထဲမှာ ဆကျရှိနမေယျဆိုတာ ကြှနျတျောပွခငျြတယျ ကြှနျတျောလညျးဗြာ။နိုငျငံသားတဈယောကျပဲ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောမကြှမျးကငျြတဲ့ နို ငျငံရေး လောကထဲ ဝငျဖို့ဆိုတာ သိပျ ကိုခ ကျခဲ လှနျးပါ တယျသူငယျစဉျ က တညျးက အသကျ မှေးဝမျးပွုခဲ့သလိုကြှနျတျောတို့ အနုပညာရှငျ တှကေ လညျး ငယျစဉျကတညျးက အနုပညာပိုးတှေ ပါ လာ လို့ အထိုကျ အလြောကျ အောငျ မွငျ နကွေတာပဲလဗြော
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော အနုပညာ လုပျငနျးကို ဆကျလုပျသှားမယျ အနုပညာရှငျ မြိုးဆကျသဈလူငယျတှေ မှေး ထုတျသှားမယျCDMနဲ့ ပတျသကျလို့လုပျတာနဲ့မလုပျတာ ဘာကှာသှား လဲဆိုတော့အိပျရတာနဲ့အိပျယာပုံစံအိပျပြျောတာနဲ့အိပျ မပြျော တာ ကှာ သှားတာ ပေါ့ဗြာ(ရယျလကျြ)တဈခု ရှိ တယျ ဗြ
အနုပညာရှငျ သမားတှရေဲ့အားနညျးခကျြ ကငှရေမဲ့ လမျးကွောငျးဆို အရမျးလိုကျတယျတဈရကျ နှဈရကျ လောကျ လမျးပျေါ ထှကျ ဒါလေးလုပျပေးပါ လို့ ပွောလိုကျတာနဲကြှနျတျောတို့ ဇာတျကောငျးပေါငျးဘယျ လောကျရိုကျမှ ရ တယျ ဆို တဲ့ ငှအေမောကျ ကိုသူတို့ကောငျးကောငျးသိတလိုအခွားတဈဘကျမှာရှိတဲ့ အနုပညာ ရှငျ အခငျြးခငျြး လညျး သိ တယျခု နိုငျငံတျော လူကွီးတှေ ပိုသိမှာ ပေါ့ဆိုပွီး ​အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပွောထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကိုခနျ့စညျသူရဲ့ Video မှတျတမျးလေး. ဆငျဆာ မပေးပါ သဖွငျ့ နားလညျ ပေးစေ ခငျြ ပါ တယျ။ပွောသှားတာလေး သဘောကလြို့ ကောကျနုတျတငျပွလိုကျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။အခုလိုဝငျရောကျဖတျရှု့ပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျခွငျးစီတိုငျးကနျြးမာပြျောရှငျသော နရေ့ကျ မြားပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ် ကြီးရေပိုက်ဆံမျက်နှာကြောင့် နိုင်ငံရေး လုပ်နေတဲ့အနုပညာရှင် တွေကို ခန့်စည်သူ ပြောပြီရုပ်ရှင်ဥက္ကဌကြီးဟောင်း ခန့်စည်သူ က အားလုံးသိအောင် ပြောပြီ။
ရန်ကုန် ဇွန် (၆) ရက် နို င်ငံတော် စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင် စီလက် ထက် ပထမ ဆုံး အကြိမ်ရုပ်ရုင် အစည်း အရုံး ဥက္က ဌ အဖြစ်တာဝန် ပေးခြင်းခံ လိုက် ရ သည့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူနှင့် ပတ်သက်၍အနုပညာ အတိုင်း အဝန်း အချို့နဲ့၎င်းအား အားပေးနေသည့်ပရိတ်သတ်အချို့တို့အကြားလူမှု ကွန်ရက်စာ မျက်နာများပေါ်တွင် ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက် လျက် ရှိ သည် ကို သိပြီး ဖြစ်မှာပါ
ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌဟောင်းကိုခန့်စည်သူ၏ သဘောထား မှတ်ချက်များအား ကောက်နုတ် တင်ပြ လိုက် ရပါသည်။ခု ချိန်မှာ ကျွန်တော့် ကို ဝေဖန် နေကြ မယ်ဆို တာကျွန်တော် ကြို တွက် ပြီးထားပါ။ကျွန်တော်တို့ လော က အတိုင်း အဝန်းတွေ ကရော ကျွန်တော့်ကို ချစ် တဲ့ ပရိတ်သတ် တွေ ကရောပေါ့ဗျာကျွန်တော် ပြော မ ယ့် တာဝန် ဆိုတာ ယူချင်မှလည်း ရ ချင် မှ ရ တာ ရ ချင် သော် လည်း ပေးချင်မှ ပေးတာမျိုးလေ ဗျာဆိုတော့ ဘယ် လိုပဲ ပြော ကြ ပါ စေ ဗျာ။
ကျွန်တော် ကျွမ်းတဲ့ အနုပညာ ကျွန်တော်ကျင်လည် နေတဲ့ လောက ထဲ က ထဲမှာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြချင်တယ် ကျွန်တော်လည်းဗျာ။နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်တဲ့ နို င်ငံရေး လောကထဲ ဝင်ဖို့ဆိုတာ သိပ် ကိုခ က်ခဲ လွန်းပါ တယ်သူငယ်စဉ် က တည်းက အသက် မွေးဝမ်းပြုခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင် တွေက လည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာပိုးတွေ ပါ လာ လို့ အထိုက် အလျောက် အောင် မြင် နေကြတာပဲလေဗျာ
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အနုပညာ လုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်သွားမယ် အနုပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ မွေး ထုတ်သွားမယ်CDMနဲ့ ပတ်သက်လို့လုပ်တာနဲ့မလုပ်တာ ဘာကွာသွား လဲဆိုတော့အိပ်ရတာနဲ့အိပ်ယာပုံစံအိပ်ပျော်တာနဲ့အိပ် မပျော် တာ ကွာ သွားတာ ပေါ့ဗျာ(ရယ်လျက်)တစ်ခု ရှိ တယ် ဗျ
အနုပညာရှင် သမားတွေရဲ့အားနည်းချက် ကငွေရမဲ့ လမ်းကြောင်းဆို အရမ်းလိုက်တယ်တစ်ရက် နှစ်ရက် လောက် လမ်းပေါ် ထွက် ဒါလေးလုပ်ပေးပါ လို့ ပြောလိုက်တာနဲကျွန်တော်တို့ ဇာတ်ကောင်းပေါင်းဘယ် လောက်ရိုက်မှ ရ တယ် ဆို တဲ့ ငွေအမောက် ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတလိုအခြားတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အနုပညာ ရှင် အချင်းချင်း လည်း သိ တယ်ခု နိုင်ငံတော် လူကြီးတွေ ပိုသိမှာ ပေါ့ဆိုပြီး ​အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုခန့်စည်သူရဲ့ Video မှတ်တမ်းလေး. ဆင်ဆာ မပေးပါ သဖြင့် နားလည် ပေးစေ ချင် ပါ တယ်။ပြောသွားတာလေး သဘောကျလို့ ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်သော နေ့ရက် များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Military council orders doubling of call charges and internet data rates
December3Gold Market Gasoline prices Exchange rate; World Gold Price
Bad news for internet users across Myanmar (coming soon)
Whoever choosesamortgage with the US’s remorse’s Cheetah
The United States has said what the people of Burma want to hear
Sagaing Division is close to becoming the first liberated area
UN Security Council condemns continued re-appointment of Kyaw Moe Tun
It could becomeacyclone on December 3
You’ve madearecord of the Yun Yun case
ထားဝယျအခွစေိုကျ ခလရ ၂၅ မှ စဈသား ၂၅ ဦး လကျနကျအပွညျ့အစုံဖွငျ့ ထှကျပွေး
တရုတျမွို့ကွီးအခြို့ကို စိုးရိမျရသညျ့ အနီရောငျအဆငျ့ သတိပေးခကျြ ထုတျပွနျလိုကျပွီ